ICanLocalize: Affordable Guqula indawo yakho yoShishino ukuze ufikelele kubaphulaphuli abatsha | Martech Zone
Iarhente yam isebenza ukuncedisa inkampani enxulumene nokunakekelwa kwezempilo ngeelwimi ezimbini ukwakha indawo yabo, ukuyilungiselela ukukhangela, kunye nokuphuhlisa unxibelelwano lokuthengisa kubathengi babo. Ngelixa babenendawo entle yeWordPress, abantu abayakhayo baxhomekeke kuyo ukuguqulelwa komatshini kubakhenkethi abathetha iSpanish. Kukho imiceli mngeni emithathu ngokuguqulelwa komatshini kwindawo, nangona:
Cofa -Uguqulelo lomatshini waseSpain khange luthathele ingqalelo iMexico lwesigodi yeendwendwe zayo.
I sigama -Uguqulelo lomatshini alunakho ukulungiselela unyango oluthile isigama.
Okusesikweni -Iinguqulelo, ngelixa zilungile, bezingengoncoko ngokwendalo… into eyimfuneko xa uthetha nabaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Ukulungiselela bobathathu, kuye kwafuneka sidlule ngaphaya kokuguqulelwa komatshini kwaye siqeshe inkonzo yokuguqulela isiza.
Iinkonzo zeWordPress zeWPML zokuGuqulela
kunye Iplagi yeelwimi ezininzi yeWPML kunye nomxholo omkhulu weWordPress (Iindali) esiyixhasayo, sikwazile ukuyila nokupapasha isiza ngokulula saze sabandakanya iiNkonzo zoGuqulelo lweWPML ukuguqula ngokupheleleyo isiza ngokufanelekileyo ICanLocalize's iinkonzo ezihlanganisiweyo zokuguqulela.
ICanLungisa iiNkonzo eziDibeneyo zokuTolika
Yazisa inikezela ngenkonzo edibeneyo ekhawulezayo, enobungcali, kwaye efikelelekayo. Banikezela ngaphezulu kwe-2,000 eqinisekisiweyo, abaguquleli bomthonyama abasebenza ngaphezulu kweelwimi ezingama-45. Iirhafu zabo ziphantsi kakhulu kuneearhente zesiko ezamkela kuphela amashishini amakhulu okanye ezifuna naluphi na uhlobo lokuseta i-akhawunti ngesandla.
Usebenzisa i-WPML yoGuqulelo lweDashboard edityaniswe ne-ICanLocalize, unokukhetha izinto zoguqulo kwaye uzongeze kubhasikidi wokuguqulela. Ubalo lwamagama kunye neendleko zibalwa ngokuzenzekelayo kwaye zihlawuliswe kwikhadi lakho letyala kwi-akhawunti yakho ye-ICanLocalize. Iinguqulelo zilayini kwaye zipapashwa ngokuzenzekelayo kwindawo yakho.
Ngaphandle kweziza zeWordPress ezakhiwe ngeWPML, ICanLocalize inokuguqulela amaxwebhu eofisi, iifayile zePDF, isoftware, usetyenziso lweselfowuni, kunye nemibhalo emifutshane.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Yazisa.
tags: inguqulelo efikelelekayoincanlocalizeuguqulo oluhlanganisiweyotranslationiinkonzo zoguquloulwimi lweelwimi ezininziiplagi yamagamaInguqulelo yamagamaInkonzo yokuguqulela i-wordpresswpml